La kulan Lila HD astaamaha astaanta fudud | Laga soo bilaabo Linux
La kulan Lila HD mawduuc fudud oo astaan ​​ah
Ku sii wadida tabarucaadka si loo hagaajiyo muuqaalka qaybintayada 'Linux', waxaan kuu soo qaadaneynaa mowduuc astaan ​​cusub, oo leh xirfad dhameystiran isla markaana lagu dari karo mowduucyo kala duwan iyo jawiga desktop.
Mawduucan astaanta fudud ee quruxda badan ee magaca ku baxa Mawduuca astaanta Lilac HD, wuxuu leeyahay muuqaal weyn oo ah in astaamaheeda lagu soo bandhigo 5 codad wacan, taas oo na siineysa dabacsanaan aan ku darsano xirmo isku mid ah qaababka muuqaalka kala duwan.
1 Waa maxay astaanta astaanta Lila HD?
2 Sida loo rakibo astaanta astaanta Lila HD
Waa maxay astaanta astaanta Lila HD?
Mawduuca astaanta Lilac HD waa a astaamaha bilaashka ah ee loogu talagalay Linux, waxaa hindisay Christian Pozzessere taasna waxay heshay xoogaa horumar ah iyadoo ay ku mahadsan tahay iskaashiga Valerio Pizzi.
Mawduucan quruxda badan waxaa lagu qaybiyaa 5 midab oo kala duwan, oo leh astaamo ka mid ah kuwa loo isticmaalo iyo barnaamijyada, iyadoo lagu darayo astaamaha adeegyada, qaybaha, falalka nidaamka, mymetypes ee dadka kale, dhammaantoodna ilaalinaya wada noolaanshaha iyo khad naqshad aad u nadiif ah.
Fiidiyowgaan uu sameeyay abuurahiisa waxaan ku qiimeyn karnaa si faahfaahsan mid kasta oo ka mid ah astaamaha xirmadan astaanta ah ee aadka u wanaagsan, taas oo ka tagi doonta wax ka badan hal afkooduna furan yahay.
Sida loo rakibo astaanta astaanta Lila HD
Si loo rakibo mawduuca astaanta 'Lila HD' ee 'distro' kasta waa inaan raacnaa talaabooyinka soo socda, furitaanka terminal oo aan ku socodsiino amarrada lagama maarmaanka u ah hawl kasta, waa in loo fuliyaa sidii xidid ama sudo.
Ka saar noocyada hore ee muuqaalka astaanta Lila HD:
Waxyeelo mawduuca rasmiga ah ee astaanta astaanta:
Nuqul faylalka mawduuca muuqaalka 'Lila HD' galka galka astaantaada '
Cusboonaysii keydka astaanta:
gtk-update-icon-cache / usr / share / icons / Lila_HD gtk-update-icon-cache / usr / share / icons / Lila_HD_Kaki gtk-update-icon-cache / usr / share / icons / Lila_HD_Blue gtk-update-icon -cache / usr / share / icons / Lila_HD_Dark gtk-cusboonaysiin-icon-cache / usr / share / icons / Lila_HD_Green
Tirtir galka astaamaha astaanta Lila HD ee aan soo dejinay.
Ka hawlgal astaamaha xulashada maareynta astaanta ee distoorkaaga.
Waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxeysatid xirmadan wanaagsan ee astaamaha lagu tijaabiyay Ubuntu iyo Antergos oo leh Gnome, XFCE, Cinnamon, Mate iyo Plasma laakiin taasi waa inay ka shaqeysaa wax kasta oo Linux ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » La kulan Lila HD mawduuc fudud oo astaan ​​ah
Way fiican yihiin waxayna sidoo kale xoogaa ka baxaan isbeddelkii ugu dambeeyay ee ah inay dhammaantood yihiin wax isku mid ah qaabka Naqshadeynta qaabka.
Ku jawaab Sebas
Christian Pozzessere dijo
Waad ku mahadsan tahay maqaal fiican.
Lagu daray astaamo cusub iyo galka kujira xasiloonida cusub ee 3.0.
Hadaad jeceshahay dulucda astaanta, fadlan cusbooneysii.
Shaqo wanaagsan bartaada.
Jawab Cristian Pozzessere
Sida loo rakibo AceStream Linux oo aadan u dhiman isku dayga
Saxiix, ugu dambeyn bilaa xariga Google